Xubno ka tirsanaa Al Shabaab oo lagu Dilay Magaalada Mombasa ee Dalka Kenya | Baydhabo Online
Xubno ka tirsanaa Al Shabaab oo lagu Dilay Magaalada Mombasa ee Dalka Kenya
Booliska Dowlada Kenya ayaa shaaca ka qaaday in Magaalada Mombasa ee Dalkaasi ay ku Dileen labo Ruux oo muddo 2-bilood ah lagu raad joogay oo ka tirsanaa Xarakada Al Shabaab.
Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska, Walter Abondo ayaa waxuu sheegay Ciidamada Booliska in ay weerar ku qaadeen Degaanka Mishomoroni, halkaasina ay ku Dileen labo ka mid ahaa Al Shabaab, mid kalena uu ka baxsaday.
Booliska ayaa sidoo kale waxey tilmaameen in ay heleen Kiimikooyin laga sameeyo waxyaabaha qarxa, Bambaanooyin iyo Rasaas ay isticmaalayeen labada Ruux ee toogashada lagu Dilay, sida ay sheegeen Booliska.
“Muddo labo billood ayaan ku raadjoognay raggan balse waxaa xaqiiq ah in wada shaqeyn ay kala dhaxeysay Xubno ka tirsan Xarakada Al Shabaab oo ku sugan Magaalooyinka Lamu iyo Milindi ee Dalka Kenya”, sidaasi waxaa yiri Taliye Walter.
Weeraro xoogan oo dhawaan siyaabo kala duwan uga dhacay qeybo ka mid ah Dalka Kenya ayaa mas’uuliyadoodu waxaa dhabarka u ritay Xarakada Al Shabaab oo ku sugan Gobolada qaar ee Dalka Soomliya.
Xarakada Al Shabaab ayaa kordhisay Weerarada ay ka fulinayaan Dalka Kenya tan iyo markii Xoogaga Dowladda Kenya ay gudaha u soo galeen Dalka Soomaaliya, islamarkana ay ku biireen howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM.
Sikastaba, Boqolaal ka mid ah Ciidamada Dowladda Kenya ayaa dhawaan la soo dhoobay Degaano dhaca xadka kala qeybiya Dalalka Soomaaliya iyo Kenya, si bey yiraahdeen Saraakiisha Kenya looga hortago Weerarada Xarakada Al Shabaab.